Yini iRobotic Process Automation? | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Mashi 29, 2019 NgoLwesihlanu, Mashi 29, 2019 Douglas Karr
Elinye lamakhasimende engisebenza nalo lingichaye embonini ethokozisayo abathengisi abaningi abangase bangazi ukuthi ikhona. Ku-Studyplace Transformation Study yabo ethunywe ngu Ubuchwepheshe be-DXC, I-Futurum uthi:
I-RPA (i-robotic process automation) ingahle ingabi seqhulwini kwi-media hype njengoba yayinjalo kodwa lobu buchwepheshe bebusebenza ngokuthula nangokufanelekile bungena kwezobuchwepheshe kanye nomnyango we-IT njengoba amayunithi ebhizinisi efuna ukwenza imisebenzi ephindaphindwayo, ukunciphisa izindleko, ukukhuphula ukunemba kanye nokuhlolwa kwamabhuku ezimali, futhi kubhekwe kabusha ithalente lomuntu emisebenzini esezingeni eliphakeme.
Ukushintshwa Emsebenzini Nedijithali
Imininingwane ebalulekile engu-9 Ukuthinta Ikusasa Lomsebenzi
Ekugcineni, I-Robotic process automation (RPA) isoftware ehlangana nesoftware ukuyenza isebenze kahle. Njengoba sonke sibona, isitaki sobuchwepheshe benkampani siyaqhubeka nokwanda futhi sinenqwaba yezinhlelo, izinqubo, nezinqubo ezivela eceleni.
Izinkampani zilwela ukuhlanganisa amapulatifomu, imvamisa azikwazi ukuhambisana nentuthuko eqhubekayo. Isoftware yeRPA igcwalisa lelo gebe elidingeka kakhulu. Isoftware ye-RPA imvamisa iyikhodi enamakhodi aphansi noma amapulatifomu angenawo amakhodi ahlinzeka ngesixhumi esibonakalayo somsebenzisi esilula sokwakha izixhumi zomsebenzisi ngokwezifiso noma izinqubo zokubangela. Ngakho-ke, uma i-ERP yakho iyi-SAP, iStack Stack sakho siyiSalesforce, izimali zakho ziku-Oracle, futhi unezinye izinkundla eziyishumi nambili… isixazululo seRPA singathunyelwa ngokushesha ukuhlanganisa zonke.
Bheka okwakho Izinqubo Zokuthengisa Nezokumaketha. Ngabe abasebenzi bakho bangena imininingwane ephindaphindwayo kwizikrini noma amasistimu amaningi? Ingabe abasebenzi bakho bahlala behambisa imininingwane kusuka kolunye uhlelo luye kolunye? Iningi lezinhlangano zikhona… futhi kulapho i-RPA ine-Return emangalisayo ku-Investment.
Ngokwenza ngcono ukuxhumana kwezinhlaka zomsebenzisi nokunciphisa izingqinamba zokufakwa kwedatha, abasebenzi kulula ukuqeqesha, abakhungatheki kangako, ukugcwaliseka kwamakhasimende kunembe kakhudlwana, kuncishiswa ezinkingeni ezisezansi, futhi inzuzo iyanda iyanda. Ngezibuyekezo zamanani ezikhathi zangempela kuzo zonke izinhlelo, izinkampani ze-ecommerce nazo zibona ukwanda okuphawulekayo kwemali engenayo.
Kunezinqubo eziphakathi nendawo ezingashintshwa nge-RPA:
Ufunde - uhlelo luphendula ekusebenzisaneni nomsebenzisi. Isibonelo, i-Clear Software ineklayenti enezikrini ezingama-23 ku-ERP yazo ezikwazile ukuwela kusixhumi esibonakalayo somsebenzisi esisodwa. Lokhu kunciphise isikhathi sokuqeqesha, kuthuthukiswa ukuqoqwa kwedatha, futhi kwehlise inani lamaphutha (kungasaphathwa ukukhungatheka) ngabasebenzisi lapho befaka imininingwane.
Akugadiwe - uhlelo lubangela izibuyekezo ezixhumana nezinhlelo eziningi. Isibonelo singangeza iklayenti elisha. Esikhundleni sokungeza irekhodi ohlelweni lwabo lwezezimali, i-ecommerce, ukugcwaliseka, nokumaketha… I-RPA ithatha futhi ihlunge futhi iguqule idatha njengoba idingeka futhi ivuselele ngokuzenzakalela zonke izinhlelo ngesikhathi sangempela.
Intelligent - I-RPA, njengabo bonke obunye ubuchwepheshe, manje ifaka ubuhlakani bokuqapha nokuhambisa ngokuzenzakalela ama-bots ukwenza izinqubo kuyo yonke inhlangano.
Ezinye izinhlelo zesikole esidala ze-RPA zincike esikrinini sokugcwala nokugcwalisa izikrini ngesandla. Izinhlelo ezintsha ze-RPA zisebenzise ukuhlanganiswa okukhiqizwayo nokwenziwa yi-API ukuze izinguquko ezinhlangothini zomsebenzisi zingakuphuli ukuhlanganiswa.
Ukuqaliswa kwe-RPA kunezinselelo. Iklayenti lami, i-Clear Software, ibhale ukubuka konke okuvelele kwe-RPA nokuthi ungazivikela kanjani izingibe zokuqaliswa kwe-RPA.
Landa Indlela Engcono Ye-RPA
Tags: Apiezishintshayoisoftware ecacileCRMdxcikusasaUkuhlanganiswajon gilmanOracleoda ukheshii-otcinqubo yokwenza i-robotici-rpasalesforceSAPisipiliyoni somsebenzisiisikhombimsebenzisi somsebenzisi